အယ်ဒီတာ၏ရွေးချယ်မှု - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
Is itabit hard to think of something to give your dad on Father’s Day? Have you already given him shirts, mugs, and all other basics? Well, it’s time for an upgrade, and give him the things he deserves.
If your dad seems to have it all, and never givesahint of what he likes, we’ll help you think of what to and what not to give on Father’s Day!
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 3, 2021 ဇြန္လ 3, 2021 McKenzie ဂျုံးစ်	မှတ်ချက် Leave
တစ်စုံတစ်ယောက်ကကော်ဖီသောက်ခဲ့တာလား ကော်ဖီသည်မူလအစများစွာရှိပြီးရာစုနှစ်များစွာကြာရှည်ခဲ့သည်။ အမှန်တကယ်ကော်ဖီ၏သမိုင်းသည်အတိအကျမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသို့ပြန်သွားသည်ဟုယူဆကြသည်။ ၁၇ ရာစုကဥရောပနိုင်ငံများ၌ကော်ဖီမြင့်တက်လာသည်။ လူတွေကကော်ဖီမသောက်ခင်ဘီယာနဲ့ဝိုင်ကိုနံနက်စာနဲ့သောက်ခဲ့တာလား။ ယနေ့ကော်ဖီနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမြတ်ဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်ရရှိနိုင်သည့်အဆင်ပြေမှုဖြစ်သည်။ အမျိုးမျိုးသောကော်ဖီဆိုင်များ၊ သေးငယ်သည့်ချည်နှောင်မှုများနှင့်ဒေသခံကော်ဖီဆိုင်များပင်ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိသည့်ကော်ဖီကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့်နေ့စဉ်ကော်ဖီ ၀ ယ်ခြင်းကစတင်တိုးပွားလာပြီးအိမ်တွင်ကော်ဖီပြုလုပ်ခြင်းသည် ပို၍ နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, လတ်ဆတ်သောကော်ဖီ၏အဆင်ပြေအိမ်မှာပိုပြီးရရှိနိုင်ဖြစ်လာသည်။
အငှားချခြင်း၊ ဝယ်ခြင်း - မည်သည့်အရာသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သနည်း။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 2, 2021 ဇြန္လ 2, 2021 Gustavo Marques	မှတ်ချက် Leave
ငွေရေးကြေးရေးကိုဂရုစိုက်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောအသက်တာအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ငွေတောင်းခံခြင်း၊ ပိုက်ဆံချွေတာခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောအရာများကို ၀ ယ်နိုင်ခြင်းသည်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိရန်အရေးကြီးသည်ဟုစီးပွားရေးနိုဘယ်ဆုရရှိသူ Angus Deaton နှင့် Daniel Kahneman တို့၏လေ့လာမှုကဖော်ပြသည်။
Sore Muscles လျင်မြန်စွာလမ်းညွှန်ချက် - ၅ DIY ကယ်ဆယ်ရေးနည်းလမ်းများ
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick ဇြန္လ 1, 2021 မေလ 29, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
သင်၏အနာကြွက်သားများကိုအနှိပ်ခံခြင်းကမြန်ဆန်။ သက်သာစေမည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အနှိပ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ သင်ကပရော်ဖက်ရှင်နယ်အနှိပ်ကုထုံးကိုပေးချေနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကစျေးကြီးလာနိုင်တယ်။
အဲဒီအစား, သင် Self- အနှိပ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုပေမည်။ ကိရိယာတစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုရိုးရှင်းစေသည်။ ရှိပါတယ် Shiatsu အစုလိုက်အပြုံလိုက် ၎င်းသည်သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှကြွက်သားနာကျင်မှုကိုကုသရာတွင်အလွန်ထိရောက်ပါသည်။ သင်၏အနှိပ်တွင်ဂျင်း၊ Rosemary သို့မဟုတ်ယူကလစ်ပင်စသည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများကိုထည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏အနှိပ်ကိုတိုးစေသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 31, 2021 မေလ 29, 2021 Isabella မော်ဂန်	မှတ်ချက် Leave
ယေဘူယျအသုံးပြုသူများအတွက် Instagram နှင့်သုံးစွဲသူများထုတ်လုပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများအားဝေမျှရန်ပြသသော်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့တွင်ကြော်ငြာခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပရိသတ်များနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ပင်ပါဝင်သည်။
ထိုအခါသူတို့ဘဝအသက်ရှင်သောလူရှိပါသည် Instagram မှတစ်ဆင့်။ ၎င်းတို့သည်အကြောင်းအရာဖန်တီးသူများနှင့်သြဇာသက်ရောက်သောစျေးကွက်သမားများဖြစ်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောသို့မဟုတ်သန်းပေါင်းများစွာသောနောက်လိုက်များကိုမျှဝေခြင်းဖြင့်စုဆောင်းသည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 30, 2021 မေလ 29, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
သင်မကြာသေးမီကယာဉ်မတော်တဆမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သလား သင်ရရှိခဲ့သည့်မည်သည့်ဒဏ်ရာကိုမဆိုသင့်လျော်စွာလျော်ကြေးပေးသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက်အမှားမကင်းပါက၎င်းအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာတင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင်ကြွေးတင်နေသည်ကိုလက်ခံရရှိရန်အတွက်သင်၏တရားဝင်ရွေးချယ်မှုများကိုလေ့လာရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 29, 2021 မေလ 28, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
မကြာသေးမီကအတိတ်ကာလတွင်နည်းပညာသည်လူ့ဘ ၀ ၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယနေ့သင့်အိမ်၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုမှကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြီးမြောက်ရန်နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ နည်းပညာသည်ဘဝကိုပိုမိုပျော်စရာကောင်းပြီးကဏ္ aspects များစွာတွင်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
ဆက်သွယ်မှုကိုမြန်ဆန်စွာချက်ချင်းပြုလုပ်ခြင်းမှသည်အင်တာနက်မှတစ်ဆင့်အင်တာနက်ပေါ်မှအချက်အလက်အမြောက်အများကိုမျှဝေခြင်းမှနည်းပညာသည်ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။ နည်းပညာသည်သင်၏ဘဝကိုပျော်စရာနှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည့်နည်းလမ်း ၅ ခုရှိသည်။
ဂေါက်သီး 101 - အစပြုသူများအတွက် Dos And Don'ts
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 28, 2021 မေလ 27, 2021 Stephanie Snyder	မှတ်ချက် Leave
လုပ်ပါ - ကားမောင်းတာကိုလေ့ကျင့်ပါ
သင်၏ဂေါက်သီးဂိမ်းကိုပုံမှန်သင်တန်းတစ်ခုတွင်စတင်လေ့ကျင့်သောအခါသင်ပိုမိုအောင်မြင်သောအခြားကစားသမားများကိုကိုင်ထားလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်နောက်ကွယ်မှကစားသမားများမတက်အောင်သေချာစေရန်အပေါက်တစ်ခုချင်းစီကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာကစားရန်သင်ပိုမိုဖိအားခံစားရလိမ့်မည်။ မောင်းနှင်မှုအကွာအဝေးတွင်သင်၏အချိန်နှင့်လေ့ကျင့်မှုများကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်နှုန်းဖြင့်ယူနိုင်သည်။ သင်သည်အခြေခံများကိုလေ့လာပြီးသင်၏ကိုယ်ပိုင်ကစားဟန်စတိုင်ကိုလေ့လာပြီးနောက်သင်သည်ဂေါက်ကွင်းကိုအစဉ်အလာသင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်အရည်အသွေးပစ္စည်းအရည်အသွေးရွေးချယ်မှု၏သက်ရောက်မှု
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 25, 2021 မေလ 24, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
ပြoftenနာရှိသည့်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏမစဉ်းစားပါ၊ သို့သော်အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအသုံးပြုသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးကင်းရေးအတွက်သာမကမည်သည့်ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုလည်းအရေးကြီးပါသည်။ အမှန်မှာ၊ အချို့သောကုမ္ပဏီများသည်ငွေကိုချွေတာရန်အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းသို့မဟုတ်အဆင့်နိမ့်သောပစ္စည်းများကို ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်လူများအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်သုတေသနပြုခြင်းများမပြုလုပ်ပါကအချို့သောပစ္စည်းများသည်လုံခြုံမှုမရှိကြောင်းအလွယ်တကူပင်သိရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုစတင်နိုင်မည့်အချက် (၃) ချက်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 24, 2021 မေလ 23, 2021 ဒေးဗစ်ဂျက်ဆင်၊ MBA	မှတ်ချက် Leave
သင်၌စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဓာတ်ရှိပြီးစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များပြည့်နှက်ပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်စဉ်းစားခြင်းသည်သဘာဝကျပါသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်စီးပွားရေးကျောင်းသို့မတက်လျှင်၊ ၎င်းသည်အမြဲတမ်းရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မည်။ အမှန်တရားမှာအကြံဥာဏ်ရှိခြင်းသည်အောင်မြင်သောအကျိုးတူလုပ်ငန်း၏အစသာဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 23, 2021 မေလ 23, 2021 James Fox	မှတ်ချက် Leave
အကယ်၍ သင်စျေးကွက်၌အကောင်းဆုံးမီးဖိုကိုရှာရန် ၁၀ နေရာတွင် ၉ ကြိမ်ရှိလျှင်၊ ရရှိနိုင်သည့်ရွေးချယ်စရာအရေအတွက်များစွာကြောင့်သင်စိတ်ဆိုးနိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းမှုများပြားသောအမှတ်တံဆိပ်များစွာရှိပြီးလွယ်ကူစွာဆုံးဖြတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သင်လိုအပ်သောမီးဖိုကိုရရှိရန်အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုအသုံးပြုပါ။
သင့်မှာကိရိယာကိုမလိုအပ်ဘူးဆိုရင်မဝယ်ပါနဲ့။ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည်ဗေဒနှင့်စွမ်းအင်ဥပဒေကြမ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တခါတရံတွင်လူများသည်သူတို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောဗားရှင်းကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
၅ အံ့သြဖွယ်ရာနည်းလမ်းများ Animation သည်ကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ပုံကိုပြောင်းလဲနေသည်
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 23, 2021 မေလ 23, 2021 အဲလက်စ်ဘီလီ	မှတ်ချက် Leave
ယခုလက်ရှိအွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ အဝေးမှအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်ကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆီသို့ ဦး တည်ရွေ့လျားလာသည်နှင့်အမျှယခင်ကထက်ပိုမိုချိတ်ဆက်သင့်သည့်ကမ္ဘာကြီးတွင်အဆက်ပြတ်သွားသည်ဟုခံစားရရန်လွယ်ကူသည်။ သို့သော်လူကြိုက်များသည့်ကာတွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းကြောင့်လူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်လုပ်ရန်ယခင်ကထက် ပို၍ နည်းလမ်းများစွာရှိနေသည်။ ဤဆက်သွယ်မှုများသည်မမျှော်လင့်ဘဲဖန်တီးမှုနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 22, 2021 မေလ 21, 2021 Tracie ဂျွန်ဆင်	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ခြံမြေလုပ်ငန်းသည်အမြဲတမ်းကြီးထွားလာနေသောအသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုဖန်တီးလို။ အောင်မြင်ခြင်းရလိုသူများအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ လိုအပ်သောပညာရေး၊ နိုင်ငံအတွင်းတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်နှင့်အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်တို့ပါဝင်သောအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်လိုအပ်ချက်များရှိသည်။ သင်အရည်အချင်းပြည့်မီကြောင်းသင်ဆုံးဖြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အိမ်များကိုစတင်ရောင်းချခြင်းနှင့်ကော်မရှင်များထံမှရရှိသောငွေအမြောက်အများကိုစတင်ရရှိနိုင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင့်အားအမြဲတမ်းလိုချင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အောင်မြင်သောအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုမည့်အချက်ငါးချက်ပါရှိသည်။
5 ပံ့ပိုးမှုစဉ်းစားရန် Awesome Charities
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 19, 2021 မေလ 21, 2021 Sierra Powell	မှတ်ချက် Leave
သင်၏ငွေရေးကြေးရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်သင်၏နှလုံးနှင့်နီးစပ်သောဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းရင်းကိုထောက်ပံ့ရန်ဆန္ဒရှိသည်ဟုသင်ခံစားရသည့်နေရာတွင်သင်၏ဘဝအသက်တာ၌ရောက်ရှိနေပြီလား။ ပထမခြေလှမ်းသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်သင်၏ရန်ပုံငွေများကိုအသုံးချမည့်တရားဝင်အကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများစာရင်းကိုစီခြင်းဖြင့်ရက်ပေါင်းများစွာမပါလျှင်သင်၏နာရီကိုယူပါလိမ့်မည်။ ပရဟိတလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရန်မခက်ခဲပါ။ ထို့ကြောင့်ဤဆောင်းပါးသည်ပေးကမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်သင်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးအကျိုးအမြတ်အတွက်မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းငါးခုကိုစုစည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 19, 2021 မေလ 21, 2021 Carlos Whitney	မှတ်ချက် Leave
အိမ်ပိုင်ရှင်များသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ခြံထဲသို့ ထွက်၍ တိရိစ္ဆာန်အသေကောင်များကိုရှာကြသည်။ ဤမေးခွန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြီးမားဆုံးမေးခွန်းမှာသေနေသောတိရစ္ဆာန်နှင့်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အချို့သောတိရိစ္ဆာန်အသေကောင်များသည်သေးငယ်ပြီးသေးငယ်သောအမှိုက်ပုံထဲမှစွန့်ပစ်ထွက်ခွာသွားနိုင်သော်လည်းအခြားသူများမှာမူတိရိစ္ဆာန်အသေကောင်ကုမ္ပဏီ၏အကူအညီမပါဘဲစွန့်ပစ်ရန်ပိုကြီးပြီးပိုခက်ခဲသည်။
12... 36 ပို့စ်အဟောင်းများ